Jaaliyadda Puntland ee Ohio oo Taageeray Maamulka Cusub ee Madaxweyne Deni | Somali National Television - sntv.so
Home PUNTILAND Jaaliyadda Puntland ee Ohio oo Taageeray Maamulka Cusub ee Madaxweyne Deni
Columbus (SNTV):- Xaflad si weyn loo soo abaabulay oo ay ka soo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Columbus Ohio ee dalka Mareynkanka.
Xafladan oo ay soo abaabuleen Jaaliyadda Puntland ohio waxaa lagu taageerayay isbadalka Maamulka Puntland iyo doorashadii dhawaan ka dhacday halkaasi.
Mudadii ay xafladu socotay qadka Teleefonka waxaa uga soo qeyb qalay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilahi Dani oo qurba joogta Puntalnd ku ammaanay doorkooda dhaqaale iyo siyaasadeed oo sida uu sheegay aan la xaqiri karin,
Waxa uu madaxweynuhu ugu baaqay qurba joogta Soomaaliyeed gobol walba oo ay ka soo jeedaan in laga qeyb qaato sidii Soomaaliya markale u noqon lahayd dowlad xooggan iyo in lala shaqeeyo maamulada dalka ka jira iyada oo la siinayo talooyin wax ku ool ah.
Mas”uuliyiintii ka hadlay xaflada oo aad u badnaa ayaa diirada saaray sida loogu baahan yahay in la taageero isbadal walba oo dalka horumar u horseedi kara,isla markaana laga shaqeeyo sidii is faham iyo is dhexgal bulsho loogu samayn lahaa shacabka Goboladda.
Madaxweyne Dani ayay ku ammaaneen doorkiisa bilowgaa ee dhex dhexaadinta Madaxda dowladda iyo maamulada dalka ka jira, iyaga oo ku booriyay in uu ku sii dhiirado taabo galinta howlaha Nabadda.
Waxaa xaflada dhankooda qeyb ka ahaa Fanaaniin Soomaaliyeed oo dadka madadaalinayay iyo dhalinyaro soo bandhigtay ciyaaraha dhaqanka.
Previous articleWasiirka Waxbarashada XFS oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya
Next articleWasiirka Qorsheynta XFS oo kulan wadatashi ah ka furay Muqdisho